My son’s First Diary – Thet Nandar
Posted on November 23, 2008 January 19, 2015 by Thet Nandar
သားလေး ၁နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အကြို မိသားစုနှင့်အတူ ကစားကွင်းတွေ သွားဆော့တုန်းက အမှတ်တရ ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံပါ။ သားသားက နို့ဗူးကို မကြိုက်ဘူး။ မော့ပီးသောက်နေရလို့နှင့် တူပါတယ်။ ပိုက်နဲ့သောက်ရတဲ့ ဗူးပဲကြိုက်တယ်။ သောက်ဖို့အတွက် မော့နေစရာမလိုလို့နဲ့တူပါတယ်။ သားသားက နို့ဗူးတွေကို မွေးကတည်းကကို မကြိုက်ပါဘူး။
Duck cloth အကျီနှင့် ၁၁လ အရွယ် သားသား
Youtube : http://youtu.be/eXDldpbu7xg
My son who was eleven months old, still notayear old. He still needs 14 days to become one year old. He’s looking at his sister draw, and follows her around. He’s already wanting to do what other people are doing. He knows how to holdapencil, and how to draw on paper already. My 11 Months old son is very bright for his age. A pencil or crayon on his hand and he does know what to do with it.
သားသား ၁၀လ သား အရွယ်ကတည်းက …. ကစားကွင်းတွေလည်း ကောင်းကောင်းသွားတတ် ဆော့တတ်နေပါပြီ။ အပြင်ကိုလည်း ကြိုက်တတ်နေပြီး … ၉လသား နှင့် လမ်းလည်း ကောင်းကောင်း လျှောက်တတ်နေပါပြီ။ သမီးလေး ဆံပင်က အဲဒီတုန်းက ရှည်သေးတယ်။ ၂၀၀၉ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးကျတော့ ဆံပင်တိုလေး ညှပ်လိုက်ပါတယ်။
သားသား ၉လ အရွယ်ကလေး နှင့် Nursery room ထဲမှာ ဆော့နေရာကနေ mommy ဆီကို တစိုက်မတ်မတ် လမ်းလျှောက်ပီးလာနေပုံ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ အရင် ၆လသား အရွယ်ကတည်းက တစ်ခုခုကို ကိုင်ပီး မတ်တပ်ရပ်တတ်၊ မတ်တပ်ရပ်ပီး နေရာ တနေရာကနေ တနေရာကို ခုံတွေ စားပွဲတွေ နံရံတွေ ကိုင်ပီးသွားတတ်နေတာပါ။ Mommy က နံရံတွေမှာ ပုံလေးတွေကပ်ထားပေးတော့ အဲဒီပုံတွေကိုင်ကြည့်ရင်းနှင့် နံရံကို ကိုင်ပီး လမ်းလျှောက်ရင်းနှင့်ကြည့်တတ်နေပါပြီ။ ဧည့်ခန်းက ခုံတွေ စားပွဲတွေကို ကိုင်ပီး ဟိုသွားလိုက် ဒီသွားလိုက်လုပ် … တနေရာနဲ့ တနေရာ အကူးမှာ ကိုင်စရာမရှိတဲ့ ခြေလှမ်း ၂ လှမ်း ၃လှမ်းစာလောက်ကို သားလေးက ဒီအတိုင်း အလွတ်လျှောက်နေရာကနေ ၉လသားလေးနဲ့ လမ်းကို ကောင်းကောင်းလျှောက်တတ် ပြေးတတ်နေပါပီ။ မမ Angel နဲ့ စိန်ပြေးတမ်းကစားရင် ဂွေဝိုင်းထဲမှာ ထိုင်ပီး ပြေးနေရတာကို အားမရလို့နဲ့တူပါတယ်။ (လမ်းမလျှောက်တတ်ခင်တုန်းက သားလေးက ဂွေဝိုင်းမှာထိုင်ပီး မမ Angel နဲ့ စိန်ပြေးတမ်း ဆော့ကစားတတ်ပါတယ်။) သားသား ငယ်ငယ်လေးနဲ့ လမ်းလျှောက်တတ်နေတာ။ ပြေးနိုင်နေတာကို mommy ဂုဏ်ယူပါတယ် သားလေးရယ်။
သားလေးကို အဲဒီကားလေးထဲ ထည့်ပီး ထမင်းကျွေးပါတယ်။ ကားလေးကို ရှေ့တိုးလိုက် နောက်ဆုတ်လိုက်နဲ့ သားလေးကို အဲဒီကားပေါ်မှာ ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်ဖို့ mommy ချော့ပြီး ထမင်းကျွေးနေရာကနေ သားလေး အိပ်ပျော်သွားတဲ့ပုံလေး။ ချစ်စရာ ကြင်နာချင်စရာ မေမေ့သားလေး …
သားလေး ရလ အတိပြည့်တဲ့နေ့က ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံပါ။ အိပ်ရာက နိုးလာရင် ကုတင်ပေါ်မှာ မတ်တပ်ရပ်နေလို့ ကုတင်ကို နောက်ထပ်တစ်ဆင့် နိမ့်လိုက်ရတယ်။ သားလေး ပြုတ်ကျသွားမှာစိုးလို့ပါ။
သားလေး ၆လကတည်းက မောက်ပီးသွားလိုက် လေးဘက်ထောက်ပီးသွားလိုက် မောက်ပီး တရွှတ်ဆွဲသွားလိုက် လုပ်နေရာကနေ ၆လခွဲလောက်မှာ ကောင်းကောင်း လေးဘက်ထောက် သွားနိုင်တယ်။ သားလေး ရလ လည်း ကျရော လေးဘက်ထောက်ပီးသွားတာ ပြေးနေသလား အောက်မေ့ရတယ်။ မမ Angel နဲ့လည်း လေးဘက်ထောက် ပီး အပြေးပြိုင်လိုက်သေး (လေးဘက်ထောက်ပြိုင်ပွဲ) ပေါ့။ mommy ဆီကို လာတာလေ။ mommy က ဒိုင်လူကြီးပေါ့။
Youtube : http://youtu.be/XabYkZFgH6g
Happy and playful boy. Big sister helping baby brother learn to crawl. Older sister playing with her baby brother.
potty training6months old baby
သားလေးကို အိမ်သာ အထိုင်သင်နေတာပါ။ သားလေးနိုးလာတာနဲ့ အိမ်သာအိုးပေါ်မှာ ရေဗူးလေးဖြင့် ရေတိုက် ပီးတာနှင့် ရှုးရှူးပေါက်တာကို အကျင့်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ အမေကလည်း နှုတ်ကနေ ရှူးး … ရှူးး … အော်ရပါသေးတယ်။
သားလေး ၅လနဲ့ ခုတင်ပေါ်မှာ မောက်နေရာကနေ ထိုင်လိုက်တာ။ ၅လနဲ့ ထိုင်တတ်တဲ့ သားသားလေး
4လ သားလေးကို necktie လေးနဲ့ ဆင်ပေးထားတာ။ ချစ်လွန်းလို့ မာမီသားလေးကို စမတ်ကျကျလေးတွေ ဝတ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
သားလေးရဲ့ ရေချိုးဇလုံ bath tub လေး
လူကြီး ရေချိုးတဲ့ bath tub ပုံစံ ဒီဇိုင်းလေးနှင့် ဆင်တူပါတယ်။ ရေထွက်တဲ့အပေါက်ပုံစံ bath tub ပုံစံ ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့ ကလေး ရေချိုးဇလုံလေးပါ။ mommy အတွက်တော့ အဲဒီ ရေချိုးဇလုံက အဆင်ပြေပါတယ်။ သားလေးကို ခေါင်းလျှော်ပေးရတာအပြင် ရေချိုး ဆပ်ပြာတိုက်တာပါ အဆင်ပြေပါတယ်။ ရေသန့် တစ်ဗုံးကိုတော့ ဘေးမှာထားပြီး … သားလေး baby shower နှင့် ဆပ်ပြာတိုက်ပီးပီဆိုရင် mommy က ရေသန့်ဖြင့် ရေချိုးပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ ရေချိုးပြီးတဲ့ အခါကျရင် ရေချိုးဇလုံအောက်က ရေပေါက်ကို ဖွင့်လိုက်ရုံပါပဲ။
သားလေးရဲ့ ကုတင်က အရုပ်လေးနဲ့ ဆော့ ခြေထောက်လေးနဲ့ကန်လိုက် လက်လေးနဲ့ ပုတ်လိုက် အသံမြည် လည်တော့ သားသားက အဲဒီအရုပ်လေးကို အရမ်းကြိုက်ပေါ့။
Here isasneak peak of his3month old session
He is holding his head up the best yet, he did great holding it long enough to getacouple of shot in! Enjoy your sneak peak!
သားလေး ၃လ မှာ မှောက်တာ။ အိပ်ရာပေါ်မှာ ပက်လက်ကလေးထားပီး အရုပ်ကလေးတွေနဲ့ ဆော့ရင်းကနေ သားသားဘာသာ မှောက်တတ်လာတာပါ။
Youtube : http://youtu.be/NOdUlvvJ9Lk
My son after 45 days is laughing, rare moments because most of the time is sleeping and crying. At 1.5 months, my baby listens to my voice, watches my face as I talk.
သားလေး ၂လမပြည့်ခင်က ဇက်ကလေးလည်းခိုင် ပြုံးတတ် ရယ်တတ် ကလေး ဘာသာစကားများ ( ဂူးဂူး၊ ဘားဘား၊ မားမား၊ ဝါးဝါး ) စကားလည်း ပြန်ပြောတတ်၊ အမှီနဲ့လည်း ထိုင်နေတတ်ပီ။
သားလေး ၅ ပတ်သား အရွယ်တုန်းက … ရေချိုးအပီး … ကတုံးလေးလည်း တုံးအပီး mommy ကို ပြုံးပြ နေတာလေ။ မြူလိုက်ရင် အသံလေးထွက်ပီး အူလှိုက် သည်းလှိုက်ကို ရီမောနေတဲ့ mommy ရဲ့ အချစ်ဆုံး အသည်းပေါက်မတတ်ချစ်ရတဲ့ သားလေး …
When you were born I felt …..သားလေးကို နို၀င်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ မွေးပီးတာနှင့် mommy … သားသားကို ပထမဦးဆုံး မြင်ကတည်းက စပီး ပျော်လွန်းလို့ … ၀မ်းသာလွန်းလို့ mommy ပါးစပ်တောင် မပိတ်နိုင်အောင် တစ်ချိန်လုံး ပြုံးနေမိတာ၊ ရယ်မောနေမိတာ အမှန်ပါပဲ။ သားလေး ကျန်းကျန်းမာမာနှင့် လူလောကထဲကို အောင်မြင်စွာ လာနိုင်ခဲ့လို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ၀မ်းမြောက် ဂုဏ်ယူမှုအပေါင်းတို့နှင့် လတ်မိသားစု ( Latt Family ) မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် သားလေးရယ် ….
Tags: Baby, First DiaryCategories: My Channel - YouTube, My son's First Diary, Son
2 thoughts on “My son’s First Diary”
Aye Myat Thu says:
how lucky you’re to be their mom everyday for the rest of your life.
I hope your son will read this and realize how truly lucky he is to have you!
Next16 month old boy, climbing the slide